Forum serasera malagasy Boko-Haram - Hiara-hihetsika ihany i Afrika? - Dinika forum.serasera.org
Boko-Haram - Hiara-hihetsika ihany i Afrika?
Fitohizan'ny hafatra : Boko-Haram - Hiara-hihetsika ihany i Afrika?
hery - 26/01/2015 16:19
Ny Afrikana no anisan'ny be nimenomenona tamin'ny hetsika JeSuisCharlie tany Frantsa farany teo hoe olona firy fotsiny no maty dia anaovana hetsika goavana tahaka an'iny kanefa ireo matin'ny Boko Haram aty Afrika tsy misy miraharaha. Dia naverimberiko ombieny ombieny hoe anjaran'ny Afrikana no tokony mijery an'izany satria raha ny Afrikana kosa aza ve tsy taitra inona no antenaina avy amin'ny firenena hafa? Ny hetsika JeSuisCharlie dia tsy hevitra avy amin'ny Firenena Mikambana fa hetsike nentin'ireo samy Eoropeana hampiseho ny firaisan-kinany hanohitra ny mpampihorohoro... izay mampihorohoro ny Eoropeana aloha. Noho izany tsy tokony hiandry olona hafa ny Afrikana fa mba manao izay mety koa miara-mientana hanohitra izay mpampihorohoro ao aminy... dia ny Boko Haram izany.
Heno tokoa ary izao fa manomboka tonga saina ny Afrikana ka hijery akainy ny mikasika an'io olana hiatrehana ny Boko Haram io. "Mila fiaraha-mientana amin'izay ny fiatrehana ny Boko Haram." Tamin'ny fisokafan'ny fihaonan'ireo filankevitry ny minisitry ny Firaisambe Afrikana tatsy Addis-Abeba izay fanomanana ny fihaonan'ny filohampirenena afrikana amin'ny faran'ny herinandro no nitranga izany soso-kevitra izany. Tsapan'izy ireo fa efa manomboka miparitaka amin'ny firenena hafa tahaka an'i Cameroun ny Boko Haram fa tsy mijanona fotsiny tao Nigeria, ary manomboka miha mahery vaika hatrany ny fanafihana ataony. Ilaina noho izany ny fandraisana fanapahan-kevitra maharitra itambarana hiatrehana ny fampihorohoroana.
Andrasana fatratra izay avoakan'ity fihaonamben'ny fivondronambe Afrikana amin'ny faran'ny volana Janoary ity hahitana raha misy avy hatrany ny fepetra raisina hiatrehana ny Boko Haram. Marihina fa vao tsy ela akory dia nanao fanafihana nahafatesana olona sivily an'arivony, sy fandorana tanàna maro, ny Boko Haram.